यस्तो छ इटलीमा रहेका नेपालीको अवस्था ? – Sagarmatha Online News Portal
यस्तो छ इटलीमा रहेका नेपालीको अवस्था ?
बार्सिलोना । कोरोना भाइरस संक्रमण युरोपमा ह्ववात्तै बढेको छ । प्रभावित मुलुकमध्ये इटली अग्रप्रक्तिमा छ । पछिल्लो एक सातादेखि इटली ‘लक–डाउन’ को अवस्थामा छ । १५ दिनको ‘क्वारेन्टाइन’ अवधि तोकिएको भए पनि मुलुकको पछिल्लो अवस्था हेर्दा अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
अति आवश्यकीयबाहेक घरबाट बाहिर निस्कनसमेत प्रतिबन्ध गरिएको छ । नियमको उलंघन गरेमा ३ महिना जेल सजायदेखि २ हजार युरो जरिवानासमेत तोकिएको छ । इटलीका २१ हजार १ सय ५७ संक्रमितमध्ये जम्मा १ हजार ९ सय ६६ जना निको भएका छन् । इटलीमा १ हजार ४ सय ४१ जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।
इटालीलाई समेत हेर्दै आएको स्विट्जरल्याण्डस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार, इटालीमा १ हजार ७ सय ३२ जना नेपाली छन् । हालसम्म कुनै पनि नेपाली कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोपबाट संक्रमित नभएको दूतावासले जनाएको छ । एक सातादेखि घरभित्रै बसेका नेपालीहरू मानसिक तनाव झेल्नुपरेको बताउँछन् । सामान्य खोकी लागे पनि, हाछ्यु आए पनि संक्रमण भइहाल्यो कि भन्ने मानसिक त्रास उनीहरूमा छ ।
अहिलेसम्म इटालीमा कुनै नेपालीहरुलाई सङ्क्रमित भएको छैन । तर अहिले प्रकोपको स्थिति भने युरोपभरि नै अप्ठ्यारो छ । इटालीको एक साता अघिदेखि नै पूर्णरुपमा लकडाउन भएको छ ।
सुरुवाती दिनहरुमा कतिपय नेपाली विद्यार्थीहरु इटलीबाट नेपाल फर्कने ईच्छा व्यक्त गर्दै दूतावासको सम्पर्कमा आएका थिए । तर टीआईएमा स्वास्थ्य जाँच हुने र त्यस्तो देखियो भने क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि मनस्थिति परिवर्तन गरेका थिए । इटलीमा पनि स्वास्थ्य सुविधाहरु राम्रो नै छ। खानपिनको सप्लाई रोकिएको छैन । उपचारमा भेदभाव हुँदैन । त्यो देखेपछि उहाँहरुले मनस्थिति चेन्ज गरेका हुन । त्यसपछि इटालीबाट नेपाल फर्कन्छु भन्ने सोच राखेर नियोगमा कसैले पनि सम्पर्क गर्नुभएको छैन ।
विशेष गरी इटालीमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई हाम्रो अनुरोध के छ भने त्यहाँ स्थानीय प्रशासनले लागु गरेको नियमलाई पालना गरौं। आफू सुरक्षित रहौं, अन्य नेपालीहरुलाई पनि सुरक्षित रहन प्रेरित गरौं । एक अर्काको सम्पर्कमा रहिरहौँ । हामीले यसप्रकारका सन्देशहरु दूतावासबाट सूचना जारी गरिएको छ ।